Khadka wax soo saarka mashiinka maaskaro ee loo yaqaan 'KN95 semi-automatic'
Mashiinka qaboojiyaha waxaa lagu dabaqayaa tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka.
Awood wax soo saar -200pcs / sanad, gaar u ah macaamiisha, naqshadeynta iyo caawinta horumarinta macaamiisha, waxaan u soo bandhignay Merak-Jin xin Hawada-Qaboojinta Nidaamka (Wuxi) Co., Ltd;
Faa'iidada wax soo saarka: Miisaanka fudud, meel yar, qaab fudud oo macquul ah, nolol adeeg dheer, ugu yaraan 30 sano
KN95-ku-dhisay sanka birta mashiinka filimka siligga ah, oo la duubay oo si gooni gooni ah loo gooyay, 100 gogo 'daqiiqadii.
Kabadhada kala-goynta (DFBK) waxaa lagu dabaqayaa tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka. Awood -500pcs / sanadkii, gaar u ah macaamiisha. Waxaan diyaarinay Fuji, kingway, skoda (Shiinaha).
Straddle monorail bogie, waxay ku lug leedahay horumarin, diidmo iyo wax soo saar. Waxaa loo adeegsaday tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka, awoodda -100pcs / sanad, gaar u ah macaamiisha. Waxaan keennay Shirkadda Tareenka Shiinaha ee Xaddidan, Shiinaha Sky Railway Group.
Qalabyada: miiska weyn ee alxanka alxanka, Xariiqa sare ee mashiinka 5-geesoodka ah; oo ay weheliso warshad si fiican u qalabaysan, farsamo yaqaanno xirfad leh iyo koox shaqaale xirfad leh oo aad u tiro badan.
Waxaa lagu dabaqay tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka, awooda stator-2200pcs / sanad; khaas u ah macaamiisha, waxaan bixinay Bombardier (Shiinaha & Europ), skoda (Czech), tareenka Shiinaha.
Waxaa loo adeegsadaa tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka, awoodda daboolida dhamaadka waa in ka badan kun xabbadood sanad walba; khaas u ah macaamiisha, waxaan bixinay Bombardier (Shiinaha & Europ), skoda (Czech), tareenka Shiinaha.
Waxaa loo adeegsadaa tareenka fudud, baabuurka dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka, awoodda fallaadhihii waxay ka badan yihiin kun gogo 'sanad walba; gaar u ah macaamiisha. Waxaan keennay Bombardier (Shiinaha & Europ), skoda (Czech), tareenka Shiinaha.
Waxaa loo adeegsadaa tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka, awooda matoorka rotor-3000pcs / sanadkii, awooda qeybaha kale ee gawaarida jarista-kumanaan; khaas u ah macaamiisha, waxaan bixinay Bombardier (Shiinaha & Europ), skoda (Czech), tareenka Shiinaha.
Waxaa lagu dabaqay tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, raadadka xawaaraha sare, tareenka rasaasta iyo taraamka, awoodda -250pcs / sanadkii. Gaarka ah macaamiisha, waxaan u bixinay China Railway Group Limited,;
Qalabka waxsoosaarka horumarsan: xarunta makiinada dhidibka afarta nus, xarunta makiinada jiifka ah, miiska tijaabada saxsanaanta oo leh Qalabka Imtixaanka oo dhameystiran (tijaabada Hook, tijaabada hawada, baaritaanka daalka, iwm.)
Codsatay in tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare, tareenka rasaas iyo taraamka, awoodda -100pcs / sanad, gaar u ah macaamiisha, waxaan u keenay Shiinaha Railway Group Limited, Shiinaha samada tareenka Group;
Qalabka: miiska wareegga weyn ee alxanka, saxsanaanta sare ee 5 - xarunta makiinada gantry Waxaan leenahay warshad si fiican u qalabeysan, farsamo yaqaanno xirfad leh iyo koox shaqaale xirfad leh oo aad u tiro badan.
Guri matooro biyo qaboojiye ah
Waxaa lagu dabaqay tareenka fudud, gaariga dabaqa hoose, tareenka xawaaraha sare leh, tareenka rasaasta iyo taraamka, guriga mootada biyo qaboojiya ayaa bixiya saameynta qaboojinta weyn ee wareegga qaboojinta biyaha. Awoodda guriga mootada biyaha lagu qaboojiyo waa 1500pcs / sanadkii oo awoodda qeybaha kale ee mootada jarjartu ay ka badan tahay kun gogo 'sanad walba. Macaamiisha, waxaan bixinnay Bombardier (Shiinaha & Europ), skoda (Czech), tareenka Shiinaha.
Si fudud loo isticmaalo, dhibaato la'aan xagga nadaafadda ah, dhibaato la'aan kaydinta budada qaxwada, soosaarka qaxwada oo deggan (Novice ayaa sidoo kale sameyn kara kafee kaamil ah), waqtiga sugitaanka oo gaaban, qiimaha ugu fiican
Erayada furaha A, Erayo-fure ah B, Dhammaan Alaabooyinka